Thwebula Microsoft PowerPoint 16.0.12624.20224 – Vessoft
AndroidIhhovisiIsofthiwe yehhovisiMicrosoft PowerPoint
Ikhasi elisemthethweni: Microsoft PowerPoint
I-Wikipedia: Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint – isicelo ethandwa ukudala bese uhlela nezethulo. Omunye isici software yikhono ukuhlela nefomethi amafayela okuqukethwe okuyinto ezigcinelwe yimuphi amadivaysi. Microsoft PowerPoint isekela umsebenzi ngemifanekiso, amatafula, amashadi, ama edidiyelwe, izithombe njll Isofthiwe ikuvumela ukuba bashintshane imiphumela yomsebenzi ngokuthumela nezethulo noma hyperlink nge-imeyili. Futhi Microsoft PowerPoint kwenza ukuba baqale umsebenzi isethulo endaweni lokugcina Ukukhipha, kungakhathaliseki idivayisi zisetshenziswa. Microsoft PowerPoint ine intuitively elula interface futhi navigation komkhuba izakhi ukuthi eliphezulu touch control.
Dala futhi uhlele nezethulo
Isethi Omkhulu amathuluzi izici
Ihambisana nanoma amadivaysi
Thwebula Microsoft PowerPoint
Amazwana ku Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint software ehlobene
Isofthiwe ukusebenza nge amafayela Microsoft Office futhi ukwazi ukuhlola amafayela PDF. Isofthiwe has a ukusebenza elikhulu kanye nenombolo ye izifanekiso.
Isofthiwe ukusebenza nge amafayela ehhovisi uhlobo. Isicelo ine wonke amathuluzi adingekayo ukuze adale bese uhlela amaphepha.
Asana – isoftware eqopha imibono futhi ihlela inqubo yansuku zonke. Uhlelo lokusebenza livumela ukuphatha imisebenzi ehlukile futhi lihlanganyele ngokuhlanganyela nabanye ababambiqhaza bephrojekthi.
I-AIMP – isidlali esinamandla esisekela amafomethi womsindo athandwayo. Isoftware iqukethe ukulingana kwebhendi eningi ukwenza ngokwezifiso ikhwalithi yomsindo yamafayela womsindo.
I-Equalizer Music Player Booster – isidlali somculo esisebenzayo esiqukethe izilungiselelo ezijwayelekile zomsindo eziyi-11 kanye ne-5 band ngokulingana ebangeni elikhulu lamafrikhwensi.